Bill Committee – Kayah E-Parliament
၁။ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး(သတ္တမနေ့) အစည်းအဝေးအတည်ပြုချက်အရ ဥပဒေပြုရေး ဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည် -
(က) ဦးရန်နိုင်ဆွေ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဒေါ်အိမွန်စံ အထက်တန်းရှေ့နေ အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးစောခူးတလေ အထက်တန်းရှေ့နေ အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဒေါ်ဒေါရစ်ဦး မြို့နယ်တရားတရားသူကြီး(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးတိရိုင်း ရပ်ကွက်စာရေး အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဒေါ်မေရီဂျိုးစဖင်း ကယားစာပေယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) စောရှလမူအေးလာ ပညာရေး(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ဗိုလ်မှူးအောင်ခိုင်စိုး တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စျ) ဗိုလ်ကြီးမျိုးမြင့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ည) ဦးစိုးရယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အတွင်းရေးမှူး
၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်း၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်တို့ကို ပူးတွဲပါအတိုင်းပေးပို့ပါသည်။
၁။ ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်သတ်မှတ်သည်။ ကော်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်း(၁)နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရပါက ၎င်းနေရာသို့ အစားထိုး ရောက်ရှိလာသည့်ဝန်ထမ်းအား အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦး သည် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်နှုတ်ထွက်ခြင်းကြောင့် ကော်မတီဝင်ထပ်မံဖြည့်တင်းခြင်းများကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လွှတ်တော်အတည်ပြုချက်ရယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂။ ကော်မတီသည် ဥပဒေကြမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံ၍ စိစစ်ရမည် -
၃။ ကော်မတီသည် ဥပဒေကြမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ -
၄။ ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
၁။ အမည် ၊ ဦးတိရိုင်း
၂။ အခြားအမည် ၊ ဦးခိုင်မိုး
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/ ဘလခ(နိုင်)၀၀၄၃၃၈
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၅-၆-၁၉၈၇
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ကယားပိုင်း ရပ်ကွက်
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (သမိုင်း)
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ ရပ်ကွက်စာရေး
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးစောဦးရယ်(ခ)ဦးနရိုင်း (တောင်ယာ)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ထားမိန်း (တောင်ယာ)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်နုနု၊ အတွင်းရေးမှူး၊ဂေဘား စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ ခူ/၃၀၅၊ သရက်မြိုင်လမ်း၊ ဒေါဥခူ ရပ်ကွက် ၊ လွိုင်ကော်မြို့။
၁။ အမည် ၊ ဒေါ်အိမွန်စံ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/ လကန(နိုင်) ၀၅၃၃၄၀
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၂၀-၅-၁၉၈၃
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ L.L.B၊ BC.Sc (Hons;)
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးမြစံ၊ အထက်တန်းရှေ့နေ
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်မေ၊ မှီခို
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးလင်းသူ (ဆောက်လုပ်ရေး)
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မောင်စံသုတ (ကျောင်းသား)
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ လ/၁၄၊ လောဓမ္မရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊
၁။ အမည် ၊ ဦးစောခူးတလေ
၂။ အခြားအမည် ၊ ခူးပိုးရယ်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ကယန်း/ခရစ်ယာန်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/ ဒမဆ (နိုင်) ၀၃၆၆၂၇
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၂၂-၆-၁၉၈၅၊ (၃၁)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ သေးဆူလဲရွာ၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ L.L.B
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးစောဝေးလ်ဘာ၊ လယ်ယာ
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ဘော်မြာ၊ လယ်ယာ
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ မိုင်း/၄၉၅၊ မိုင်းလုံးရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၊ ၀၉-၇၈၈၄၁၄၉၇၆၊ ၀၉-၅၆၀၁၅၁၄
၁။ အမည် ၊ ဒေါ်ဒေါရစ်ဦး
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/ လကန (နိုင်) ၀၀၉၃၈၅
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၉-၇-၁၉၅၄
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ ဥပဒေဘွဲ့(L.L.B)
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ မြို့နယ်တရားသူကြီး(ငြိမ်း)
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးမောင်ဦး
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်သိန်းမြ
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးမောင်မောင်ဝင်း
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မောင်ထူးထက်ဦး
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ ၁၉၉၊ ခွာညိုလမ်း၊မင်္ဂလာရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ဝမ်မလန်းကျေးရွာ၊ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘောလခဲမြို့နယ်။
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မောင်ဝင်းထိုက်စိုး၊ ဒုတိယနှစ်၊
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁၇-၅-၁၉၇၈(၃၈နှစ်)
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၄-၅-၁၉၈၂၊(၃၄)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မင်းတောရွာ ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်
၇။ပညာအရည်အချင်း ၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ (စစ်တက္ကသိုလ်)
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ဒေါ်မေခင်ဦး၊ မှီခို ၊
၁၂။သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မောင်ဟိန်းမင်းခန့်၊ မှီခို
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ ပင်ဖြစ်ကျေးရွာ၊ ရပ် စောက်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း
၁။ အမည် ၊ ဗိုလ်ကြီးမျိုးမြင့်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၁၂/သကတ (နိုင်) ၀၄၀၈၅၆
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁-၁-၁၉၇၁၊(၄၅)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ အမှတ်(၅၉) ၊ ရန်ပြေ(၁၅)လမ်း ၊ အရှေ့ (၃) ရပ်ကွက်၊ သာကေတ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ပထဝီဝင်)
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ (ဦးထွန်းကြည်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ခင်ဌေးမြင့်၊ မှီခို
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်သီမော်၊ မှီခို
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မကေသရီဟန်၊ ကျောင်းသူ
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ အမှတ်(၄၈)၊မာန်မေပြ(၁၆)လမ်း၊ အရှေ့(၃)ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၁၃/နစန (နိုင်) ၀၆၅၄၃၃
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁၇ - ၇ - ၁၉၉၁ (၂၄)နှစ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ B.A (သမိုင်း)
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ သတင်းထောက်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးစိုင်းကြီး ၊ စိုက်ပျိုးရေး
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်စိုးရင်၊မှီခို
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ ကယား/၉၁၊ ကယားပိုင်းရပ်ကွက်၊
၊ ၀၉ - ၇၈၉၇၉၂၆၈၉
တိုင်စာပစ်စာနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏
ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၇၇၈၈၀၁၃၄၇
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ကရင်၊ ဗုဒ္ဓ
၊ ပြည့်ဖြိုးအောင်၊ ကျောင်းသား
၊ ပြည့်ဟိန်းအောင်၊ ကျောင်းသား
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ ဝေပါလန်ကျေးရွာ၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်
ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၄၅၂၆၉၄၁၄၁
၁။ အမည် ၊ ဒေါ်ဝိုင်းအိအိဖြူ
၂။ အခြားအမည် ၊ ဒေါ်ကြည်ပြာ
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/ လကန(နိုင်)၀၆၂၄၀၄
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁-၈-၁၉၈၄ (၃၂)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ B.C.Tech (Hons;). LL.B.
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးကျော်ကျော်ထွန်း၊ စီမံကိန်းမှူး(ငြိမ်း)
ကလျာဏမိတ္တဖောင်ဒေးရှင်း - နာယက
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်သဇင်ထွန်း၊ မှီခို
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးခင်မောင်ဦး၊ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ မြို့ပြနှင့်
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မရှိပါ။
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ တိုက်(၉)၊ အခန်း(၂)၊ တိုက်(၆)လုံးဝန်ထမ်း
ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၄၂၈၀၀၀၇၆၅
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ လ/ထ ညွှန်မှူး(နည်းပညာ)(ငြိမ်း)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ (ဒေါ်အေးတင်) မှီခို
၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ် ကျေးလက်
၊ ဟိန်းကောင်းစံ၊ ဒသမတန်း၊ မဟာမြကျွန်းသာ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း၊ ပြင်ဦးလွင်
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ဒေါ-၂၀၊ ဇော်ဂျီလမ်း၊ ဒေါတမရပ်ကွက်
ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၅၆၀၀၄၈၀
၁။ အမည် ၊
၂။ အခြားအမည် ၊
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/လကန(နိုင်) ၀၁၀၉၁၈
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၅-၉-၁၉၆၃
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ အထက်တန်းအောင်၊ ဒုတိယနှစ် (ဥပဒေ)
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးအုန်းဖေ (ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ခင်စု (ကွယ်လွန်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ကာမေးလာ၊ ပြည်နယ်ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူး
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ ပြည်နယ်ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ လောဓမ္မရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့